Marka aamusnaantu aysan ahayn ikhtiyaar: Calaamaduhu waxay gudaha u galaan taageero mudaaharaad | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Marka aamusnaanta aysan ahayn ikhtiyaar: Calaamaduhu waxay la quustaan ​​taageero mudaaharaad
Marka aamusnaanta aysan ahayn ikhtiyaar: Calaamaduhu waxay la quustaan ​​taageero mudaaharaad
George Floyd waxaa dilay booliisku 25-kii Maajo. Ilaa wakhtigaas, Mudaaharaadyada Black Lives Matter (BLM) ayaa dalka intiisa badan qabsaday waxayna noqdeen dhaqdhaqaaq caalami ah oo ka dhan ah midab-takoorka iyo rabshadaha booliiska.
Inta badan sumadaha ayaa taariikh ahaan ka fogaaday qaadashada mawqifyada siyaasadeed iyaga oo ka baqaya inay dhibsadaan qaar ka mid ah macaamiishooda. Iyadoo ay taasi si tartiib tartiib ah isu beddeshay muddo ka dib - iyadoo Millennials ay sii kordhayaan waxay filayaan inay ka istaagaan arrimaha bulshada iyo siyaasadda - xigmadda caadiga ah ayaa inta badan ku hadhay: ka fogow.
Noocyada ayaa ka fogaaday Kaepernick. Taasi waxay run ahayd ciyaartoygii hore ee NFL Colin Kaepernick's nabadeed ee "jilba joog" mudaaharaadyadii looga soo horjeeday waxashnimada booliiska qiyaastii afar sano ka hor. Waxa diiday NFL iyo inta badan magacyada (badbaadiya Nike). Ilaa hadda, shirkado badan oo caan ah sida McDonald's, Target, Netflix, Google, Apple, Microsoft, Amazon, TikTok, Facebook iyo tiro kale oo badan ayaa u tartamay inay qaataan BLM iyo mudaaharaadyada, kuwaas oo qaarkood ay sababeen bililiqo iyo isku dhacyo rabshado wata booliis. Taasi waa ka bixitaan xag-jir ah oo sannado ah iyo arrimo siyaasadeed oo la soo dhaafay.
In kasta oo noocyada qaar ay aamuseen, taasi waa wax ka reeban noocyada caanka ah ee B2C ee ugu sarreeya. Qaarkood waxay u hadlayaan sababtoo ah waa "wax sax ah in la sameeyo," qaar waxay u sameeyeen hab la xisaabiyay qaarna waxay dareemayaan inay ku qasban yihiin sababtoo ah facooda iyo tartamayaasha ayaa sidaas samaynaya. Kuwo badan oo BLM ah iyo kuwa ka baxsan ayaa dalbaday in erayada shirkadu ay raacaan ficil: tabarucaadka lacageed iyo shaqaaleysiinta, guddiga ama isbeddelada fulinta.
Ku dhawaad ​​saddex meelood meel meel ayaa taageersan mudaaharaadyada. Ra'yi ururin cusub oo Washington Post-Schar ah (n=1,006 dadka waaweyn) ayaa lagu ogaaday in 74% dadka Maraykanku ay taageeraan mudaaharaadyada, in kasta oo ay jiraan aragtiyo tartamaya oo ah inay badi nabdoon yihiin ama rabshado yihiin. Marka laga soo tago taageeradan guud, waxaa jira aragtiyo aad u adag oo ku saabsan in calaamaduhu ay tahay inay ka hadlaan iyo arrimaha ku saabsan.
Sahan cilmi-nafsi oo la sameeyay usbuucii hore (maaha gaar ahaan BLM), kaliya 20% ayaa sheegay inay "aad ugu habboon tahay" shirkaduhu inay "si cad uga qayb qaataan arrimaha bulshada," oo ay ku jiraan caddaaladda dembiyada, xakamaynta hubka iyo sinnaanta jinsiga. Jawaab bixiyaasha kale waxay bixiyeen jawaabo tayo leh: "waxay kuxirantahay arinta" (36%). Kuwo kale waxay yiraahdeen "inay ku habboon tahay" (16%), halka 28% soo haray ay yiraahdeen " haba yaraatee ma habboona."
Dareen isir baa u qaybsan. A Meey 31 - Juun 1 sahanka Subaxnimada (n=1,990 dadka waaweyn) ayaa soo bandhigay sawir aad u adag oo ku saabsan dareenka macaamilka ee ku saabsan arrimaha iyo falalka summadaha ay tahay in ay qaataan marka la eego macnaha mudaaharaadyada. Waxaana jira kala duwanaansho weyn xagga jinsiyadda xaaladaha qaarkood.
Waxaa jira heshiis ballaaran oo ah inay OK in summadaha si ay u taageeraan ganacsiyada yaryar ee ay saameeyeen bililiqada ama inay ku deeqaan nadaafadda bulshada. Taageerada mudaaharaadayaasha baraha bulshada ama ku deeqida lacag si loo damiinto dadka la xiray ayaa ah arrimo aad u muran badan.
Dadka madow waxay u badan tahay inay soo dhaweeyaan tabarucaadka sababaha caddaaladda bulshada ama ay taageeraan tababarka dareenka jinsiyadeed marka la barbar dhigo caddaanka. Laakiin guud ahaan dhammaan waxay isku raacsan yihiin in aan waxba la sheegin ay tahay fikrad xun.
Isticmaalayaasha ayaa ka shakiyay daacadnimada sumadda. Mid ka mid ah caqabadaha kale ee summadaha, sida sahanka La-talinta Subaxdii Jannaayo muujisay, waa qancinta dhagaystayaasha in mawqifkoodu yihiin kuwo run ah ama daacad ah. Macaamiisha badan (42%) waxay yiraahdeen shirkaduhu "aad bay isugu dayaan inay u muuqdaan inay daneeyaan waxyaabo aan ka ahayn khadkooda hoose." 22% kale waxay yiraahdeen "ma ogin" 36%na waxay taageereen dhaqdhaqaaqa sumadda.
Dariiqa ku xeeran caqli-galnimadani waa daacadnimo dhab ah iyo caddayn akhlaaqeed, halkii ay ka ahaan lahayd qiyaas labaad iyo xisaabinta. Si kasta oo ay ahaataba, ma jirto si dhexdhexaad ah looga noqdo cadaalad darada jinsiyadeed, aamusnaanta kiiskani maahan ikhtiyaar, ugu yaraan inta badan shirkadaha B2C.
Sababta aan u danayno. In kasta oo cadaadiska lagu hayo summadaha si ay u qabtaan mansabyo siyaasadeed uu sii kordhayey in muddo ah, tani waxay u muuqataa mid isbeddel ah ama xilli biyo-dhac ah. Si kastaba ha ahaatee ujeeddooyinkooda saxda ah, calaamadaha ku soo biiray BLM iyo mudaaharaadyada ayaa la filayaa inay si isku mid ah u istaagaan arrimaha kale ee socda. Geli xilli cusub oo aad uga adag suuq gaynta summada
Khasaaraha YouTube: 21 Khiyaamo iyo astaamo aadan malaha garanayn
14-ka ugu Fiican Xogta Keydka WordPress (Nadiifi oo Hagaajin DB-gaaga)